Guddiga Doorashooyinka oo sheegay inay soo gaareen cabashooyin ayna baaritaan ku sameynayaan - Jowhar somali news leader
Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay soo gaartay cabashooyin iyo tallooyin ku aadan doorashooyinka socda, iyadoo guddigu baaritaan ku sameynayo dhammaan cabashooyinka laga keenay kuraasta la doortay iyo kuwa la dooran rabo oo murano xooggan ku gadaaman yihiin.
Guddiga ayaa ku hanjabay in aanu aqbali doonin wax kasta oo baalmarsan hufnaanta doorashada, waxaana uu caddeeyay in guddiyada doorashada maamulaya ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda iyo faragelinta siyaasiga.
Guddiga Doorashooyinka Heer Federal ayaa waxa uu faray Guddiyada doorashada in waajibkooda u gutaan si madax bannaan oo cadaalad ah.
Qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka Heer Federal ayaa yimid kadib markii ay maanta kulan ka yeesheen arrimaha doorashooyinka Ra’iisul Wasaare Rooble iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Cirro.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federal
Gunmen attack bilingual school in Anglophone region of Cameroon – Eye on Africa